Khilaaf Xooggan Oo Ka Dhex-qarxay Guddiga Doorashada HirShab... » Axadle Wararka Maanta
By Abdiwahab Ahmed	 Last updated Jul 24, 2021
Jowhar (Axadle) – Sida ay ogaatay Axadle waxaa maalinkii afaraad galay khilaaf ka taagan doorashada Xoghayaha guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee HirShabelle iyo sameynta habraacyada xeer hoosaadka guddiga.
Guddigan ayaa horay u doortay guddoomiye iyo ku xigeenkiisa, balse waxaa banaan booskii Xoghayaha guddiga, kaas oo wajahaya loolan siyaasadeed oo adag.
Xubno ka tirsan guddiga doorashada HirShabeelle ayaa Axadle u sheegay inay jirto faro-gelin uga imaneysa bannaanka, taas oo sababtay in afar kulan oo guddigu yeeshay lagu kala dareeray, iyadoo aan la gaarin wax is faham ah.
Khilaafkaan ayaa ka taagan laba arrin oo kala ah doorashada Xoghayaha guddiga iyo sameynta xeer hoosaadka guddiga, waxaana la sheegay in faro-gelinta ugu weyn ay ka imaaneyso Agaasimaha guud ee NISA oo sanadkaan musharax Xildhibaan ah.
Xogta aan helnay waxay intaas ku dareysaa in Fahad Yaasiin uu doonayo in Xoghayaha guddiga laga dhigo shakhsi uu wato, sidoo kalena xeer hoosaadka guddiga lagu cadeeyo awood xad-dhaaf ah oo Xoghayuhu uu yeelanayo, taas oo xubno ka mid ah guddiga ay ka biyo diideen.